Ciidamadii gadoodsanaa ee Puntland oo ka baxay xarunta baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamadii gadoodsanaa ee Puntland oo ka baxay xarunta baarlamaanka
Gawaari gaashaaman oo ay leeyihinn ciidamada gadooday oo la dhigay banaanka xarunta baarlamaanka. [Xigashada Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamadii hubaysnaa oo gadooday qabsadayna xarunta baarlamaanka Puntland ee kutaala gudaha magaalada Garoowe, ayaa lagu soo waramayaa in ay halkaas isaga baxeen.
Ciidamada ayaa go’aansaday ka bixida xarunta baarlamaaka kadib markii Islaan Ciise Islaan Maxamed oo isimada Puntland kamid ah uu ku qanciyay ciidamada in la siinayo waxa ay rabaan.
Ciidamada ayaa dib ugu laabtay saldhigyadooda rasmiga ah ee kuyaala duleedka magaalada, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ciidamada ayaa ka carooday kadib markii dowladdu ay ku fashilantay in ay siiso mushahaarkoodii muddo ka badan sanad, sida saraakiil dowladda ah ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror.
Tan iyo markii Cabdiwli Maxamed Cali loo doortay madaxweynaha Puntland bartamihii bishii Janaayo ee sanadkii 2014-kii, gobolada Puntland ayaa goobjoog u noqday hirar gadoodyo ah oo ka dhashay mushahaarka iyo xaalado kale.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska ee magaalada Garoowe ayaa qabtay labo nin oo looga shaki qabo in ay ka dambeeyeen dil ka dhacay magaalada xalay fiidkii, sida uu warbaahinta u sheegaay maanta oo Talaado ah taliyaha [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Saddex xubnood oo katirsan maleeshiyada ISIS ayaa Arbacadii la geeyay maxkamada ciidamada Puntland kuwaasoo wajahaya eedaymo dilal badan oo ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso. Xubnaha oo uu kamidyahay madaxii qaraxyada iyo dilalka u [...]